Wasaaradda Arrimaha Dibada Somalia ayaa xaqiijisay in Farmaajo uu ka dalbaday dhex dhexaadin… – Hagaag.com
Wasaaradda Arrimaha Dibada Somalia ayaa xaqiijisay in Farmaajo uu ka dalbaday dhex dhexaadin…
Posted on 20 Abriil 2021 by Admin in National // 0 Comments
Wasaaradda Arrimaha Dibada ayaa xaqiijisay in Farmaajo uu ka dalbaday dhexdhexaadin Madaxweynaha Congo.
Qoraal ka soo baxay Wasaarada Arrimaha Dibbada Dowlada Federalka ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu doonayo in Midowga Afrika dhexdhexaadin ka sameyo dowladda iyo saamilayda siyaasadda.
Twitterka Wasaaradd Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu soo dhaweynaayo doorka fududayn ee Midowga Afrika.
Hase ahaatee waxaa jira cadaadis xoog leh oo ay saarayaan beesha caalamka Madaxweyne Farmaajo iyadoo si weyn uga so horjeestey muddo kordhinta ee golaha shacabka dhowaan u sameeyay Hay’adaha Dowlada.